Filmcraft Studio Gear Icwangcisa Izitulo New COVID-19 Ukhuseleko neMigangatho Director kaThixo | Iindaba ze-NAB | I-2020 I-NAB bonisa i-Media Partner kunye noMvelisi we-NAB BONISA LIVE. Iindaba zeeNjineli zoSasazo
Ikhaya » Okufumaneka » I-Filmcraft Studio Gear Icwangcisa iMigangatho eNtsha yoKhuseleko ye-COVID-19 yezihlalo zoMlawuli
I-Filmcraft Studio Gear Icwangcisa iMigangatho eNtsha yoKhuseleko ye-COVID-19 yezihlalo zoMlawuli
Ngaphezulu kweenyanga nje ezimbini, okuninzi kuguqukile, kwaye kukhanya ubhubhane we-COVID-19, Usihlalo wenkulumbuso kwishishini lokuvelisa, Ifilimu Studio Gear, ikhuphe iingcebiso ngokhuseleko ze usihlalo izikhokelo zokusetyenziswa kunye nokubulala iintsholongwane kwiiseti ezikhuselekileyo. Ukutshintsha izitulo zomlawuli wangoku ngeplastiki akucetyiswa, kwaye oku kungenxa yokuba iplastiki ibonakalise ukuba yenye indlela eyoyikisayo kwimeko-bume yethu ngokubhekisele kwi-biodegradability. Oku kunyusa kuphela ubungozi besifo. Izifundo zamva nje zichaze ngokuthe gca ukuba uzinzo oluhlala luhleli lwe-COVID-19 lelona lide na xa ukwiplastiki okanye ngentsimbi engenasici. Umthi yenye yezona zinto zicocekileyo xa kufikwa ekunciphiseni ukusebenza kwe-COVID-19, eyafunyanwa izinzile ukuya kuthi ga kwiintsuku ezisi-7 kumphezulu weplastiki ngelixa intsholongwane yayingafumaneki kwaphela emva kweentsuku ezimbini emthini. Kuba iinkuni zineempawu zendalo zokulwa ne-antimicrobial, ibonakalise ukuba iluncedo ngokuchasene nezifundo zenzululwazi zendlela i-COVID-2 enokuphila ngayo ixesha elide kwiplastikhi, iglasi, kunye nomphezulu weentsimbi ezingenasici ukuya kwiintsuku ezisixhenxe.
Imigaqo yoKhuseleko ethathiweyo
Ikhosi yokuqala yenyathelo kukuba neeseti ezintsha endaweni ye-canvas Izitulo zomlawuli. I-Canvas inokuhlanjwa ngesepha nangamanzi kunye / okanye ifafazwe ngesibulala-ntsholongwane kunye / okanye isitya sicocwe kwaye siphinde sibuyiselwe kwisakhelo sesitulo. Konke okudingayo kukuhlamba imizuzu emi-5 ngesepha, okuya kuyitshabalalisa ngokufanelekileyo i-COVID-19 ebusweni. I-iconic isitulo somlawuli weenkuni Olona khetho lufanelekileyo kwiiseti zefilimu ngenxa yolu lwazi.
Ifilimu Umnini we Studio Studio UJoe Iacobellis Kucetyiswa ukuba yeyona ndlela yokucoca efanelekileyo Izitulo zomlawuli zezi:
Chitha nge-antiseptic njengeLysol kwaye yome. Ukomisa kuvame ukuthatha ngaphantsi kwemizuzu emi-3
Hlamba i-canvas ngamanzi ashushu kunye nomoya owomileyo. Uninzi Isitulo somlawuli I-canvases zenziwe ngomqhaphu kwaye ukuhlamba kulula. Nangona kunjalo, asikukhuthazi ukuyomisa kwisomisi kuba inokunyibilikisa iidowels zeplastiki kwisahlalo sesihlalo. Ukomisa umoya kuyacetyiswa
Sebenzisa i-steamer ukucoca umphezulu ngokukhuselekileyo ngaphandle kokusebenzisa iikhemikhali ezinobungozi. I-steamer yengubo, efumaneka ngokubanzi kwiisethi zefilimu kunye neenkampani eziqashisayo, yindlela enhle yokubulala ngokukhawuleza nayiphi na ibhaktheriya okanye intsholongwane, i-steam ifikelela kwiqondo lokushisa lama-212F okwaneleyo ukucima nayiphi na intsholongwane edibana nayo. Yeyona ndlela ilungileyo neyona ilula enokuphindwa rhoqo
Umgangatho kunye nokuqina kwezitulo zomlawuli kunye nezi mpawu zisebenze njengeyona nto iphambili kwizitudiyo kwisithuba seminyaka engama-75. Izakhelo ezenziwe ngomthi zezitulo zinokucinywa ngokulula ngeLysol kunye / okanye ezinye iintsholongwane zokubulala iintsholongwane. Inkqubo ye- Ngxowa banokucocwa ngomphunga kungekho monakalo, kwaye isizathu soko kungenxa yokuqina kwabo kwizixhobo ezomeleleyo ezingenanto yakwenza neeplastiki zabo.
Xa kuziwa kwimpilo nakukhuseleko lwabathengi bayo, Ifilimu ithatha impilo kunye nokuba sempilweni kwabo njengononophelo olukhulu. Nangona kunokulangazelela ukubuyela kwimeko yesiqhelo, Ifilimu ibambe ingqwalaselo yayo yokwenza iiseti zazo zikhuseleke, zikhuseleke, kwaye zicoceke ngokusemqoka njengeqhosha lesigaba esinjalo.
Ngolwazi oluthe kratya malunga neFilim ubuhule kunye namanyathelo ayimfuneko okhuseleko athatyathwa ukuphendula kwi-COVID-19, tyelelo ifilimug.com.
i-biodegradability Ngxowa I-Covid-19 Izitulo zomlawuli Isitulo somlawuli Ifilimu Ifilimu ye studio yeFilimu UGraham Chapman uVikelelwa kuMhleli UJoe Iacobellis I-Litra I-Lysol Matthews bhubhane amanyathelo okhuseleko Imikhonto kunye neentolo I-Ultra HD Forum 2020-05-11
Previous: Iincoko zeTekhnoloji: I-NAB Bonisa uHlelo oluKhethekileyo lwe-LIVE-LIVE ngoMeyi 13-14, 2020
next: Yakha4MentalHealth yenza lula ukuhanjiswa komsebenzi kunye ne-AJA HELO